Axad 25 December 2011 (AN) Beledweyne-Somalia, mahad oo dhan Alle ayaa iska leh, nabad gelyo iyo naxariista Eebbana dushiisa ha ahaato rasuulkeena Muxammad, ehelkiisa, asxaabtiisa, iyo intii xaqqa ku raacday dhammaantood.
Mahadda Alle dabadeed waxaan mahad aad u ballaaran usoo jeedineynaa qaar ka mid ah Dumarka reer hiiraan ee magaalada Manchester (UK), oo deeq lacageed soo gaarsiiyay Guddiga Dhismaha Xarunta Agoonta Ugaas Khaliif ee B/weyne, lacagtaas oo tiradeedu ahayd $900 (sagaal boqol doolar) ayey Shamso Cabdi Siyaad oo ka wakiil ahayd dumarkaas soo gaarsiisay guddiga dhismaha dhulka Agoonta iyadoo laga jaray deyntii hore ugu harsaneyd dhismaha cusub ee agoonta.
Haddaba markii laga jaray lacagtaan ay soo dhiibeen reer dumarka reer hiiraan UK, gaar ahaan magaalada Manchester ayaa deynta hadda ku harsan waxa ay noqoneysaa $1462.3, dumarkii soo dhiibay lacagtaas waxaan Ilaahey uga baryeynaa inuu sadaqadooda miisaanka wanaagsan ugu daro, una barakeeyo xoolahooda (Aamiin).
Dhismahaan cusub ee Agoonta oo intiisa badan lacagtii ku baxday ay bixiyeen dumarka reer Hiiraan, ayaa weli waxaa muuqata ineysan dumarku ka caajisin sidii ay u dhemeystiri lahaayeen howlaha ka harsan dhammeys- tirkiisa, waad aragtaan markii baahi laga soo sheegaba waxa ugu horeeya ee codsiyada kasoo jawaaba waa iyaga, Alloow xafid oo darajeey.
Ugu dambeyntii guddiga dhismaha dhulka agoonta oo mahad aan la soo koobi karin u celinaya dumarka reer hiiraan ee Manchester-UK ee soo dhiibay lacagtaan, ayey walaalaha kale ee muslimiinta ka codsanaya inay ku daydaan dumarkaas, oo sidaas oo kale gacan siiyaan walaalahooda agoonta ah, oo Alle bacdigiis inoo wada bahan, deyntana ay ka bixisaan.